Shidaalka Duullimaadka Joogtada ah ee hadda loo heli karo shirkadaha duulimaadyada ee garoonka Cologne Bonn
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jarmalka Jebinta Wararka » Shidaalka Duullimaadka Joogtada ah ee hadda loo heli karo shirkadaha duulimaadyada ee garoonka Cologne Bonn
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Neste waxay dejineysaa sahay Neste MY Shidaalka Duullimaadka Waara ee Madaarka Cologne Bonn.
Gegada Diyaaradaha ee Cologne Bonn waa mid kamid ah garoomada diyaaradaha ee ugu horeeya dalka Jarmalka halkaas oo Neste MY Sustainable Aviation Fuel (SAF) ay hada diyaar u tahay dhamaan diyaaradaha.
Duulimaadkii ugu horreeyay ee shidaalka ku qaatay Neste MY SAF wuxuu ahaa duulimaad xamuul horaantii bishii Juun ee ay maamushay ASL Airlines iyadoo wakiil ka ah shirkadda Amazon.
Shaqaalaynta Shidaalka Duulista Waara waa tallaabo kale oo muhiim ah oo loo qaaday yoolkeenna fog ee ah duulimaadka dhexdhexaadka ah ee CO2.
Neste, oo ah shirkad bixisa shidaalka duulimaadyada waara (SAF), ayaa ka hirgaliyay keydka Neste MY Sustainable Aviation Fuel at Madaarka Cologne Bonn. Marka sidaas la sameeyo, Neste waxay gacan ka geysaneysaa la kulanka heerarka sii kordhaya ee baahida shirkadaha xamuulka iyo macaamiisha shirkadaha ee garoonka diyaaradaha ee Cologne Bonn. AFS, oo ah shirkadda ugu horreysa ee bixisa adeegyada shidaalka duulimaadyada ee Jarmalka, ayaa taageerta Neste si ay ugu adeegto suuqan. Duulimaadkii ugu horreeyay ee shidaal la siiyay Neste MY SAF wuxuu ahaa duulimaad xamuul horaantii bishii Juun ee ay maamushay ASL Airlines iyadoo wakiil ka ah shirkadda Amazon.
Horudhac ahaan waara, Madaarka Cologne Bonn waa mid kamid ah garoomada diyaaradaha ee ugu horeeya Jarmalka halkaas oo Neste MY Sustainable Aviation Fuel (SAF) ay hada ujirto dhamaan diyaaradaha. Maaddaama Cologne ay tahay xarun weyn oo xamuul oo ku taal Jarmalka, helitaanka SAF waxay siin doontaa shixnadaha adduunka fursad ay ku yareeyaan qiiqa hawada lagu sii daayo ee ka dhashay xamuulkooda hawada. Macaamiilkii ugu horreeyay ee ka faa'iideysta fursaddan wuxuu ahaa Amazon.
“Waxaan ku faraxsanahay inaan awoodno inaan u fidino shirkaddeena diyaaradaha shidaal kale oo waara. Waxaan horeyba u adeegsaneynaa tabo cusub oo farsamo badan garoonka diyaaradaha ee Cologne Bonn - laga bilaabo baalayaasha cadceedda iyo teknolojiyada LED-ka illaa adeegyada dhismaha ee hal abuurka leh iyo gawaarida iyo qalabka kale ee korantada ku shaqeeya. Shaqaalaynta Shidaalka Duullimaadka Waara waa tallaabo kale oo muhiim ah oo loo qaaday himiladeenna fog ee ah duulimaadka dhexdhexaadka ah ee CO2, ”ayuu sharxayaa Johan Vanneste, Madaxweynaha & Agaasimaha Guud ee Flughafen Köln / Bonn GmbH.
"Inkasta oo jawiga ganacsiga adag, warshadaha duulimaadyada, iyo gaar ahaan waaxda xamuulka, ay muujinayaan dadaal dheeraad ah oo lagu maal-galinayo shidaalka duulimaadka waara si loo siiyo macaamiisheeda shidaal kaarboon kaarboon kayar ah," ayuu yiri Jonathan Wood, Madaxweyne kuxigeenka Yurub, Cusboonaysiinta Duulimaadka Neste. "Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku soo dhaweyno garoonka diyaaradaha Cologne Bonn garoonka isku xiraya garoomada diyaaradaha iyadoo la heli karo SAF, waxaana rajeyneynaa inaan horumar dheeri ah ka gaarno yareynta qiiqa gaaska ee la xiriira duulista hawada."